eReeda र ebooks: सबै डिजिटल पठन र इलेक्ट्रॉनिक पाठकहरूको बारेमा सबै ईरेडरहरू
Ereaders: इलेक्ट्रॉनिक पाठकहरू
हामी सबै एक वेबसाइट ereaders र डिजिटल पठन मा विशेषज्ञता। हामी मार्केटमा उपलब्ध सबै मोडेलहरूको विश्लेषण र परीक्षण गर्छौं र हामी तपाईंलाई उनीहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरूको बारेमा बताउँछौं।
सबै भन्दा राम्रो ereader?
क्लासिक प्रश्न। यदि तपाइँ सिधा कुराकानी गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी सिफारिस गर्दछौं २।
यदि तपाईं अप टु डेट हुन चाहनुहुन्छ भने, यी भर्खरका समाचारहरू हुन् जुन हामीले प्रकाशित गरेका थियौं यो मार्केटका ब्रान्ड र विश्वको ताजा समाचारहरू हुन्। डिजिटल प्रकाशन र इलेक्ट्रॉनिक ढाँचामा पठन.
कोबो सेज, अडियोबुक र स्टाइलसको साथ एक शर्त [विश्लेषण]
सबै उपकरणहरूको समीक्षा
हामी जाँच गर्छौं र हामी प्रत्येक ई-पाठकको पूर्ण विश्लेषण गर्दछौं, हप्ताहरूको लागि, तपाईंलाई उपकरणहरूको प्रत्येक प्रयोगको वास्तविक अनुभव कस्तो छ भनेर बताउन।
हाम्रो कडा पोष्ट यो हो कि हामीले यती धेरै परीक्षण गरेका छौं कि हामी तिनीहरूलाई तुलना गर्न सक्छौं र तपाईंलाई यसको प्रतिस्पर्धाको तुलनामा प्रत्येकको क्षमता र कमजोरीहरू बताउन सक्छौं।
अमेजन Kindle, कम्पनीहरु, ईरेडरहरू, हार्डवेयर
अमेजन र तपाइँको किन्डलको बारेमा सबै
यो निर्विवाद छ कि किन्डल आज उपकरणहरू हुन् जुन प्रायः पाठकहरूले प्रयोग गर्दछन्। यसैले हामी तपाईलाई यो छोडदछौं Kindle विशेष, धेरै ट्यूटोरियल र युक्तिहरूको साथ ताकि तपाईं आफ्नो अमेजन ईबुकबाट सक्दो धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो किन्डल म्यानुअली अपडेट कसरी गर्ने
ट्यूटोरियल: मोबाइल उपकरणहरू र ट्याब्लेटहरूको लागि उपलब्ध किन्डल अनुप्रयोगको लागि पुस्तकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाइँ एक इडिटर किन्नको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यससँगै निम्न जानकारी अनुसरण हुन्छ ereaders तुलना यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
गुणस्तरमा सर्वश्रेष्ठ ईडरर - मूल्य
यदि हामी पैसाको मूल्यको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामी किन्डल पेपरहाइटलाई सबै भन्दा राम्रो ईडररको रूपमा सिफारिस गर्न जारी राख्छौं
यदि तपाईं अहिले बजारमा रहेका सब भन्दा चाखलाग्दो मोडेलहरू समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी सुझाव दिन्छौं
सर्वश्रेष्ठ eReeda को तुलना
दलाल पेपरजहाइट 6" 300ppp हो हो G जीबी / छैन 129.99 €
कोबो आभा H2O 6'8 " 300ppp हो हो G जीबी / हो 201 €
सोनी PRS-T3 आकार 300ppp होइन हो G जीबी / हो 222 €
किन्डल .4..XNUMX.०.XNUMX० 6" 166ppp होइन हो 4GbNo 79.99 €
कोबो आभा एक आकार 300ppp हो हो G जीबी / हो 227 €
Bq Cervantes ३ 6" 300ppp हो हो G जीबी / हो 139.90 €
प्रज्वलित यात्रा 6" 300ppp हो हो G जीबी / छैन 189.99 €
Kindle Oasis 6" 300ppp हो हो G जीबी / छैन 289.99 €
ईडरर / ईबुकमा के महत्त्वपूर्ण छ
वर्षहरू बित्दै जान्छन् र ईडरहरू बृद्धि भई समेकित र विकसित उपकरणहरू हुन्। केही वर्ष अघि हामीले मूल्याated्कन गरेका विशेषताहरू कुन ई-रीडर किन्नुपर्दछ भनेर परिवर्तन गर्नका लागि परिवर्तन भयो। त्यसैले आज प्रकाश भनेको लगभग एक दायित्व हो, जबकि केहि वर्ष अघि हामीले कल्पना गरेनौं कि यो हुन सक्छ।
त्यसो भए, २०१ 2019 मा हामीले के खोज्नुपर्दछ यदि हामी एक इडरर किन्न वा छनौट गर्न चाहन्छौं?
सबै कुरामा जस्तै हामीले हामीले दिन चाहेको उद्देश्य मनमा राख्नुपर्दछ।
स्क्रिन आकार र रिजोलुसन
क्लासिक ereaders को स्क्रीन आकार सँधै6been गरीएको छ र सबै भन्दा नयाँ मोडेलहरू त्यो आकारको साथ जारी रहन्छ। तर त्यहाँ big र १० ″ स्क्रिनहरूको साथमा धेरै नयाँ इडरहरू छन्।
6 read ereader अधिक व्यवस्थित र यातायात गर्न सजिलो छ। यो कम तौल जब हामी यसलाई समात्छौं। तर १० ″ एक यदि हामीले यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेनौं भने यसले हामीलाई धेरै रमाइलो अनुभव दिन्छ।
रिजोलुसनको लागि अहिले सबैभन्दा उन्नत पाठकहरू d०० डीपीआई (पिक्सेल प्रति इन्च) र १ more300 डीपीआईको साथमा अन्य आधारभूतहरूसँग काम गर्दछन्। यस मामला मा अधिक राम्रो किनभने हामी एक राम्रो परिभाषा प्राप्त गर्नेछौं
यो भर्खरको सुविधा वा कार्यक्षमता हो जुन ई-रिडरहरूमा थप गरिएको छ। यसले तपाईंको खरीदमा भिन्नता गर्न सक्दछ। खराब प्रकाशले छायाँ सिर्जना गर्दछ र तपाइँलाई पढ्न गरीब अनुभव दिन्छ।
प्रकाशको साथ ereaders यहाँ रहन को लागी, राम्रो तिनीहरू धेरै पहिले आयो, तर अब कुनै पनि आधारभूत ebook पहिले नै यसलाई समाहित गर्दछ। ठूला ब्रान्डले यसलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा सेट गरेको छ र साना प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै विकल्प थिएन यो पनि आफ्ना सबै मोडेलहरूमा यसलाई समावेश गर्नु।
प्रकाश एक चीज हो जुन ereader ब्याट्री जीवन छोटो बनाउँछ।
अपरेटि system प्रणाली स्तरमा, तिनीहरू २ समूहमा छुट्याइन्छन्, ती आफ्नै सफ्टवेयर छ र एन्ड्रोइड प्रयोग गरिरहेकाहरू, जुन पछिल्ला घटनाक्रमहरूमध्ये एक हो जुन धेरै ब्रान्डहरू सामेल भइरहेका छन्।
अहिले सम्म प्रत्येक इरिडरले आफ्नै सफ्टवेयरमा काम गरे, किन्डल र कोबो एकदम पालिश र मैत्री र निकै धाराप्रवाह थिए। तर केही समयको लागि र विशेष गरी कम ज्ञात ब्रान्डहरूमा उनीहरूले एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न सुरु गरे जुन उनीहरूलाई अनुमति दिन्छ (यदि उनीहरू राम्रोसँग चले भने) यस सम्बन्धमा ठूला ब्रान्डहरू समात्न।
एक ereader मा एन्ड्रोइड को फाइदाहरु धेरै छन्:
हामी धेरै संख्यामा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सक्छौं जसले हाम्रो पाठकको कार्यहरू र सम्भावनाहरू वृद्धि गर्दछ। पढ्दै र यसलाई पछि अनुप्रयोगहरू जस्तै गेटपकेट, ईन्स्पेपर, इत्यादि पढ्नुहोस्। हामी किन्डल र कोबो अनुप्रयोगहरू पनि स्थापना गर्न सक्दछौं र यी प्लेटफर्महरूमा हाम्रा खाताहरू पहुँच गर्न सक्दछौं।
हामीले सतर्क हुनुपर्ने कुरा प्रवाह हो। थोरै शक्तिको साथ ereader मा Andorid, ती jerks मा जान्छ र हाम्रो लागि एक अप्रिय अनुभव सिर्जना गर्दछ।
तर धेरै ब्रान्डको भविष्य ठूलाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन एन्ड्रोइडको साथ हुने छ।
मुख्य ब्रान्डहरू जब हामी इडियर्सको बारेमा कुरा गर्छौं, जुन उनीहरूको गुणस्तर र इकोसिस्टमका लागि बाहिर खडा छन् अमेजन किन्डल y कोको Rakuten द्वारा।
त्यसो भए त्यहाँ अरु धेरै नुक्क, ट्यागस, टोलिनो, BQ, सोनी, लाइकबुक, गोमेद। हामीसँग ती प्रत्येकको लागि विशेष सेक्सनहरू छन् र हामी तपाईंलाई तिनीहरू प्रत्येकले प्रदान गर्न सक्ने पत्ता लगाउन चाहन्छौं।